कतै सुन्य त कतै एक्लै
घोराही उप महानगरपालीका ६ मा रहेको मावि जजरागाँउमा रिक्त रहेको दरवन्दीका लागि शिक्षक माग गरेको एक वर्ष पुग्यो । तर विद्यालयले अहिले सम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन । २०६६...
घोराही उप महानगरपालीका ६ मा रहेको मावि जजरागाँउमा रिक्त रहेको दरवन्दीका लागि शिक्षक माग गरेको एक वर्ष पुग्यो । तर विद्यालयले अहिले सम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन ।
२०६६ सालदेखी माध्यामिक विद्यालयको स्विकृति लिएर कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले अहिले सम्म निजि स्रोतमा शिक्षक राखेर अध्यापन गराउदै आएको छ । विद्यालयको आम्दानिको स्रोत नभएकोले भर्ना तथा मासिक शुल्क उठाएरै भएपनि विद्यालय सञ्चालन गरीरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य अर्जुन अधि...
उपमहानगरभित्र असारे विकासको चटारो
बुटवलअसार महिना लागेसँगै बुटवल उपमहानगरपालीका सबै वडामा बिकास निर्माणका कामलाई तिब्र पारिएको छ । के गाँउ के शहर, प्रायः सबै ठाँउमा कतै भत्काउने काम भैरहेको छ भने कतै बनाउन...
बुटवलअसार महिना लागेसँगै बुटवल उपमहानगरपालीका सबै वडामा बिकास निर्माणका कामलाई तिब्र पारिएको छ । के गाँउ के शहर, प्रायः सबै ठाँउमा कतै भत्काउने काम भैरहेको छ भने कतै बनाउने काम पनि उत्तिकै गतिमा भैरहेको छ । यो देख्दा बुटवलबासीलाई यस्तो लाग्छ असार महिना नै बास्तवमा बिकास निर्माणको काम गर्ने उत्तम महिना हो ।
जनप्रतिनिधि लगाएतका निर्माणसँग सम्बन्धित स्थानियहरु निर्माणका काममा रातदिन नभनी जुटी रहेका छन कि । खटिरहेका छन । असार लागेयता बुटवल उपमहनग...
नयाँ मिलको पुरानो कथा
बुटवल भैरहवा सडक खण्डको एउटा बस स्टेशन । चिन्नेगरी नाउले भन्नुपर्दा नयाँ मील । यस क्षेत्रमा यात्रा गर्ने, घुम्न आउने, बसोबास गर्नेले यो ठाउँको नाउ नसुनेका र नदेखेका कमै होल...
बुटवल भैरहवा सडक खण्डको एउटा बस स्टेशन । चिन्नेगरी नाउले भन्नुपर्दा नयाँ मील । यस क्षेत्रमा यात्रा गर्ने, घुम्न आउने, बसोबास गर्नेले यो ठाउँको नाउ नसुनेका र नदेखेका कमै होलान ।
ठाउँ पुरानो भैसक्यो । नाम रहन गएको बस्तु नै थोत्रिइसक्यो ।
तर नाउँ भने सधै नयाँ, नयाँ मील छ ।
नयाँ मीलले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं.४ मा पर्ने एक चोकलाई परिचित गराएको भएपनि ठाउँको बिगतबारे कमैलाई थाहा छ । नयाँ मिल नामले परिचित गराउने मील र मील रहेको घर थोत्रिएर स...
नक्कली भ्याट विल बनाएर १५ करोड बढिको राजश्व छली
बुटवल, २२ असार । राजस्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय बुटवलले नक्कली भ्याटबिल बनाएर करो डौ ंराजस्व छली गर्ने ३ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । सामानको भ्याट बिल बनाउँदा एउटै...
बुटवल, २२ असार । राजस्व अनुसन्धान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय बुटवलले नक्कली भ्याटबिल बनाएर करो डौ ंराजस्व छली गर्ने ३ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । सामानको भ्याट बिल बनाउँदा एउटै नम्बरका धे रै बिल काटे को र बिना सिरिएल नम्बर नभएका बिल प्रयो ग गरे को भे टीएपछि राजस् व कार्यालयले भै रहवा रहे को शिब इन्टर प्राईजे जका सञ्चालक कमला रसाली र अजिमा मन्डला इन्टरप्राइजे जका सन्चालक सशांक खनाल र लामो समय दे खि भै रहवा भन्सारमा भन्सार एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएका न...
अवैधानिक क्लिनिक छ्यापछ्याप्ती
विगत लामो समय देखी दाङका धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था दर्ता नगरेरै सञ्चालनमा आईरहेका छन् । जिल्लामा करीव तीन सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेपनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्...
विगत लामो समय देखी दाङका धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था दर्ता नगरेरै सञ्चालनमा आईरहेका छन् । जिल्लामा करीव तीन सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेपनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुने स्वास्थ्य सस्थाको संख्या जम्मा ९४ रहेको छ । तर जिल्लाको भालुवाङ देखी पश्चिम हापुरे सम्म धेरै स्वास्थ्य क्लिनिकहरु अहिले पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङमा जिल्लामा कति स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् भन्ने एकिन विवरण भने छैन...
विद्यार्थीमा ‘मास हिस्टेरिया’
उत्तरीपूर्वी प्यूठानमा एकै विद्यालयमा ४७ जना विद्यार्थीहरुमा ‘मास हिस्टेरिया’ भएको पाइएको छ । गौमुखी गाउँपालिका–७ स्थित अमृत जीवन माध्यमिक विदालयमा असार ५ गतेदेखि विद्यार...
उत्तरीपूर्वी प्यूठानमा एकै विद्यालयमा ४७ जना विद्यार्थीहरुमा ‘मास हिस्टेरिया’ भएको पाइएको छ । गौमुखी गाउँपालिका–७ स्थित अमृत जीवन माध्यमिक विदालयमा असार ५ गतेदेखि विद्यार्थीहरुमा दैनिक यस्तो समस्या देखिएको विद्यालयले जनाएको छ । घरमा ठिकै भएपनि विद्यालय आएपछि विद्यार्थीहरुमा रुने, कराउने, काप्ने, हल्लिने, पेट दुख्ने, छटपटिने, मुटु दुख्ने जस्ता समस्या हुने गरेको छ ।
दुई हप्ता वितिसक्दा समेत सुधार नभएपछि विद्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ । पढ्न आ...
पर्यटकका लागि तानसेन ‘पाँच गन्तव्यमध्ये एक’
पाल्पा तानसेनलाई पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउने तयारीमा तानसेनवासी जुटेका छन् । दिनप्रतिदिन सुस्ताउँदै गएपछि उनिहरु पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यटनमार्फत तानसेनलाई जीवन्त राख्न...
पाल्पा तानसेनलाई पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउने तयारीमा तानसेनवासी जुटेका छन् । दिनप्रतिदिन सुस्ताउँदै गएपछि उनिहरु पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यटनमार्फत तानसेनलाई जीवन्त राख्ने प्रयासमा जुटेका हुन । तानसेन नेपालको पर्यटकको पाँच प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक गन्तव्यस्थल बनाउने दाबी उनिहरुको छ ।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाही नगरपालिकाले पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । तानसेनमा पञ्चायतकालदेखि पर्यटन शब्द लेख्न र भन्न नछाडिएपनि यस...
गाउँपालिकामै छैन कक्षा ११ पढ्ने स्कुल !
बुटवल प्रदेश नं. ५ को राजधानी रहेको जिल्ला रुपन्देही शिक्षामा हब रुपमा चिनिन्छ । यहाँका विद्यालयको नतिजा पनि राष्ट्यि प्रतिस्प्रर्धामा आउने गर्दछ । तर जिल्लामा रहेको एक गा...
बुटवल प्रदेश नं. ५ को राजधानी रहेको जिल्ला रुपन्देही शिक्षामा हब रुपमा चिनिन्छ । यहाँका विद्यालयको नतिजा पनि राष्ट्यि प्रतिस्प्रर्धामा आउने गर्दछ । तर जिल्लामा रहेको एक गाउँपालिकामा कक्षा ११ पढ्ने विद्यालयको संख्या शुन्य छ । जहाँका बालबालिकाहरु एसइइको पढाइ सकेपछि कक्षा ११ पढ्ने अर्को गाउँपालिकाका विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकामा सामुदायिक १६, संस्थागत १६ र धार्मिक ४ गरी ३६ विद्यालय छन् । तर ति विद्यालयले संचालन गर...
बाँध नखोलिदा डुवान
भारतीय पक्षले मझौली तालमा रहेको बाधको ढोका नखोल्दा मायादेबी गाँउपालिका ८ बिजुवाको ७ सय बिगहा बढि जमिन डुबानमा परेको छ । भारतिय पक्षले बिजुवा सँगै जोडिएको भारतिय तालमा लगाएको अग्लो तटबन्धमा...
भारतीय पक्षले मझौली तालमा रहेको बाधको ढोका नखोल्दा मायादेबी गाँउपालिका ८ बिजुवाको ७ सय बिगहा बढि जमिन डुबानमा परेको छ । भारतिय पक्षले बिजुवा सँगै जोडिएको भारतिय तालमा लगाएको अग्लो तटबन्धमा रहेका ८ वटा ढोका मध्य हाल सम्म तिनवटा मात्र ढोका खोल्दा आईतबार देखीको बर्षाले नेपाली भुभाग जलमग्न भएको हो । बर्षाका कारण बिजुवाको जमुनी, हरिवंशापुर, बिजुवा र बरकुलगाउँको खेती योग्य जमिन जलमग्न भएको स्थानिय बब्लु यादवले बताए ।
आफुहरुको करिब ७ सय विघा धान रोप्ने खेत जलमग्न ह...
सुरुभयो विपद्को त्रासदी
बुटवल यस बर्षको मनुसुन सुरु भएको छ । आईतबार रात देखि निरन्तर रुपमा देशभर पानी अविरल बर्षा भैरहेको छ । जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखा काठमाण्डौका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ को आ...
बुटवल यस बर्षको मनुसुन सुरु भएको छ । आईतबार रात देखि निरन्तर रुपमा देशभर पानी अविरल बर्षा भैरहेको छ । जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखा काठमाण्डौका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ को आइतवार रातिदेखि सोमवार साझ सम्म भैरहवामा २२६ दशमलव ९ मिलिलिटर वर्षा भएको मौसमबीद समिर श्रेष्ठले जानकारी दिए । भैरहवा पछी नेपालगञ्जमा वर्षा भएको छ । नेपालगञ्जमा २०६ दशमलव ६ मिलिलिटर वर्षा भएको छ । यो वर्षा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । यस्तै कपिलवस्तुमा १ सय ७८ दशमवल २ मिलिलिटर वर्षा...